Zijatshulelwe izinqumo zeKhomishini kwelomhlaba eMvoti – Ubukhosi
Home/ Izindaba/Zijatshulelwe izinqumo zeKhomishini kwelomhlaba eMvoti
Zijatshulelwe izinqumo zeKhomishini kwelomhlaba eMvoti
Isikhulu sakwaSASA uNkk uPortia Mpofu esayina isheke
KUBUYE ithemba emiphakathini eyahlukene ngaphansi kwesifunda uMvoti ngesikhathi uthola isinxephezelo sokusebenza umhlaba obuyiselwe wona yiKhomishini yezokubuyiswa kwemihlaba KwaZulu Natal. Umphakathi ohlomulile ngesinxephezelo ngowaseMakhabeleni, Amahlongwa naseMabomvini. Umcimbi wokunikezelwa kwemali ewumhlomulo kubantu ububanjelwe kwaSouth African Sugar Association (SASA). Izicelo zezinxephezelo zomhlaba zazifakwe abaholi bamaTrust omphakathi.
Imali eyizi-R15 586 222,00 izofakwa esikhwameni sikaSASA kube yiyo ebhekelela ukusebenza kwayo njengoba kunezivumelwano ezasayinwa phansi phakathi kwamaTrust, Ikhomishini yezemihlaba kanye noSASA. Phakathi kwezinhlangano ezintathu ezihlomulile kukhona i-Eyethu Community Land Claim ngaphansi kwesizwe saseMabomvini esiholwa iNkosi uThemba Ngubane yona eyafaka isicelo sokubuyiselwa umhlaba ngowe-1998. Lokhu kufakwa kwesicelo kwenzeka emuva kokuthi baphucwa lo mhlaba ngaphansi komthetho iLabour Tenancy Act. Lo mhlaba obuyisiwe useKranskop. Kuzohlomula imizi engama-220. Ungamahektha ayizi-3085.1565, ungabiza imali eyizi-R50 751 000,00. Kuwo lo mhlaba kutshalwe umoba indawo engamahektha ayi-1439 bese kuthi ongamahektha ayizi-2 353 ube ngowamahlathi. Sekudaleke amathuba omsebenzi angama-43 lapho kuqashwe khona amalungu omphakathi.
Okhulumela i-Eyethu Community Land Claim uMnu uSazi Mhlongo ophinde abe nguNdunankulu woMkhandlu weNkosi uNgubane ukujabulele ukuthola lolu xhaso wathi “Isizulu sithi imali ihlale ivuthiwe, siyazazi izidingo zezindawo la sisuka khona. Sibonga kakhulu noHulumeni ngokuthi asisize, ukube kuya ngathi usizo lukaHulumeni ngabe siluthola nyangazonke, minyaka yonke ngenxa yezidingo esinazo. Lokhu esikutholile sizokusebenzisa ukuthuthukisa izindawo esisuka kuzo kuqasheke nabantu emphakathini.”
Ube eseqhuba ngokuthi le nhlangano yasungulwa ngonyaka wezi-2008 leli komidi eliphethe manje lona liqale ngowezi-2013 okusho ukuthi unyaka ophezulu ngowokugcina liphethe.
Ube esecela ukugxila kakhulu ngalokhu okwenzeke ngaphansi kobuholi babo, okokuqala abakwenzile bathenge izimoto zabasebenzi ukuqinisekisa ukuthi bayafinyelela noma yikuphi lapho kumele baye khona. Uthe inhloso enkulu ukuthi kwande amathuba emisebenzi emphakathini kanye nokuzuza imali ukuze inhlangano iqhubeke nokusebenza. Izingqinamba ababhekene nazo emphakathini, okukhulu kakhulu yisomiso kanye nemfuyo engena emasimini izodla okutshaliwe.
Umphakathi waseMakhabeleni ngaphansi kwe-Amakhabela Community Land Claim nawo uhlomulile kulokhu njengoba wona wafaka isicelo sawo ngowe-1996. Lo mphakathi ungaphansi kwesizwe seNkosi uJabulani Dlomo, kanti kuwona kuzohlomula imizi engama-245, kudaleka amathuba emisebenzi angama-400. Ngaphansi kobukhosi bamaHlongwa eNkosini uNdiza Hlongwa isizwe esingaphansi kwayo sihlomule ngezi-R3 314 250,00. Isicelo sokubuyiswa komhlaba sasifakwe ngowezi-1998.
Okhulumela ikhomishini yokubuyiselwa komhlaba u-Advocate uMbili uthe kubajabulisa kakhulu ukuthi izinhlelo ezifana nalezi zisaqhubeka nokuthi zenziwe yile Khomishini.
“Ziyizi-15 000 izicelo zokubuyiselwa komhlaba kubantu, sekusele kancane ukuthi ziphothulwe. Akuyona into yosuku olulodwa kodwa kuthatha isikhathi ngoba kuningi okusuke kucutshungulwe kuphinde kuqinisekiswe ukuthi ngabe isicelo esifakiwe siyiso ngempela yini. Uthe udaba lwemiphakathi ehlomulile lusetshenzwe kusukela ngowezi-2004 kuya kowezi-2007. Lokho kwenzeka ngoba kwatholakala ukuthi izicelo zabo ziyabambeka futhi zisemthethweni base bethengelwe umhlaba.”
UMbili uqhube wathi umhlaba uyizindleko noma ngabe uyakhiqiza kodwa ngenxa yokuthi basebenza ngabantu bathola ukuthi ulwazi nangokwamakhono abo abanawo kahle hle ngenxa yokunqamuka kobudlelwano ababenabo nalabo abasebenzisa lo mhlaba.
INkosi yasObuka iphika izinsolo ngamabhasi endawo
Kubonakala belinde umnyama ongenafu eNgogo ngomhlaba